COVID-19 any Italia: Mpitsabo mpanampy vitsy noho ny ilaina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Italia » COVID-19 any Italia: Mpitsabo mpanampy vitsy noho ny ilaina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Italia • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Toa efa ampy ny vaksinim-pirenena tokony hivezivezena amin'izao fotoana izao, fa amin'ny tahan'ny fitantanana azy ireo, haharitra hafiriana ny fanaovana vaksiny ho an'ny rehetra? Ahoana no fomba handresen'i Italia ny tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy hanatratra ny tinady hanatratrarana tanjona vaksininy?
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, tonga ny vaovao manome toky momba ny drafitry ny vaksinim-pirenena hamelezana ny COVID-19 any Italia amin'ny endrika vaovao milaza fa ny Vondrona Eropeana no manome vaksiny betsaka indrindra.
Tamin'ny Alahady fotsiny dia olona 74,000 no nahazo ny tsindrona voalohany tamin'ny fanomanana Pfizer-Bio NTech. Zava-misy mampionona izany. Manomboka amin'ity herinandro ity dia miala ny vaksinin'i Moderna izay handraisan'i Italia fatra 764,000 amin'ny faran'ny febroary izay azo zahana.
Na izany aza, indrisy tsy ampy izany. Profesora Davide Manca ao amin'ny Pse Lab an'ny Politecnico di Milano, raha ny marina dia manisa fa raha mijanona ireo gadona ireo dia manome vaksiny ny vahoaka manontolo amin'ny fatra roa an'ny Pfizer dia haharitra telo taona sy tapany farafahakeliny ho an'ny haingana indrindra faritra (l'Emilia Romagna) ka hatramin'ny 9 taona an'ny Calabria, ny faritra miadana indrindra (ny laharam-bondrona farany misy amin'ny laharana dia Lombardy, izay raha nandeha toa ny efa nataony hatrizay dia maharitra 7 taona sy 10 volana ny fanaovana vaksiny ny olom-pireneny rehetra).
Mazava ho azy fa hohafohezina kokoa ny fotoana amin'ny vaksinina tokana. Fa rehefa misy izy ireo ary voatsindry fanefitra ny vahoaka amin'ny ankapobeny, ny isan'ireo vaksiny isan'andro tsy maintsy hitsangana be.
Ny Kaomisera ho an'ny Sampana vonjy taitra momba ny fahasalamana, Domenico Arcuri, dia nanombana fa raha te-hahatanteraka ny drafitra fanaovam-baksiny mandritra ny 9 volana voalohany amin'ny taona dia olona maherin'ny 12,000 no tsy maintsy miasa ao amin'ny governemanta isam-bolana eo anelanelan'ny aprily sy jona ary avy eo hiakatra 20,000 XNUMX mahery isam-bolana eo anelanelan'ny Jolay sy septambra .
Tao amin'ny taratasiny ho an'ny Corriere tamin'ny 6 Janoary dia nanazava izy fa efa "nahazo fangatahana 22,000 avy amin'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy" hiantohana izany filàna izany. Saingy ao amin'ireo isa (ary miala tsiny raha manome betsaka izahay, saingy io no fomba tokana ahafantarana tsara hoe manao ahoana ny zava-misy) dia misy ny tratra, araka ny notaterin'i Sanità tato ho ato.
Tamin'ny 7 Janoary, raha ny tena izy, dia nahatratra 24,193 ny fisoratana anarana ho an'ny fandraisana mpiasa ho an'ireo mpiasa ilaina amin'ny drafi-vaksiny. "Amin'ireny," hoy ny nosoratan'ny tranokalam-baovao momba ny politika momba ny fahasalamana, "19,196 4,997 no fampiharana efa vita ary XNUMX XNUMX ireo ao anatin'ny dingana fanangonana (izay mbola tsy fantatra ny asany).
“Amin'ireo fangatahana vita dia 14,808 no natolotry ny dokotera, 3,980 ny mpitsabo mpanampy, ary 408 ny mpanampy ara-pahasalamana. Ny olana dia, noho izany, ny 12,000 eo ho eo ny fangatahana dokotera (“telo arivo fotsiny” no ilaina) fa mpitsabo mpanampy 3,980 sy mpanampy fahasalamana 408, na 7,612 latsaka noho ireo nangatahina ”araka ny fanazavan'i Quotidiano Sanità.
"Raha tsy mitombo ny fangatahana mpitsabo mpanampy sy mpanampy ara-pahasalamana, dia tsy ho ampy ny teti-bola natokana satria ny dokotera dia mihoatra ny avo roa heny amin'ny dokotera roa hafa" hoy ny tranonkala. Raha fintinina: ny dokotera dia tsy azo afindra amin'ny asan'ny mpitsabo mpanampy fotsiny satria (raha manaiky izy ireo) dia tsy ho ampy handoavana ny karamany izay avo kokoa ny vola natokana. Raha ny marina, ny fampandrenesana dia manome karama goavam-be 6,538 3,077 euro ho an'ny dokotera ary XNUMX euro ho an'ny mpitsabo mpanampy.
Any Italie, efa vitsy ny mpitsabo mpanampy noho ny ilaina ihany koa satria kely karama izy ireo amin'ny asa mavesatra be tokony hataony. “Fantatry ny rehetra fa tsingerin'ny bisikileta ny tsy fahampian'ny mpitsabo mpanampy: nokarakarainay tamin'ny 2000 ny fandefasana mpandraharaha 30,000 avy any ivelany. Tsy maintsy hitranga indray izany.
"Ny firenentsika dia afaka miankina fotsiny amin'ny 557 mpitsabo mpanampy isaky ny mponina 100,000, raha ampitahaina amin'ny 1,024 any Frantsa ary 1,084 any Alemana," hoy i Andrea Bottega, sekretera nasionalin'ny fikambanan'ireo mpitsabo mpanampy NurSind, tamin'ny mpanao gazety. Iray amin'ireo lesoka marobe amin'ny rafi-pahasalamantsika (na ny rafitry ny fahasalamantsika, satria nivadika ho samy hafa be izy ireo any amin'ny faritra samihafa) izay nipoitra niaraka tamin'ny areti-mandringana, izay tsy maintsy horesahintsika faran'izay haingana.
Mandritra izany fotoana izany anefa dia mila vahana haingana ny olan'ny fampidirana mpitsabo mpanampy amin'ny vaksiny. Zava-dehibe ny fisorohana ny fihemorana mety hanakana ny fahasalaman'ny firenena ary, noho izany, ny fanarenana ara-toekarena ihany koa.